ARCTANGENT MIASA TSARA - EXCEL - 2019
Mampiasa ny asa arctangent amin'ny Microsoft Excel
Betsaka ny mpampiasa solosaina no tia mijery sarimihetsika an-tsehatra ho an'ny sinema, raha afaka mihazakazaka sarimihetsika tsy voafetra ianao ao anaty atmosfera. Ary na dia te-hijery horonantsary 3D aza ianao any an-trano - tsy olana ihany koa izany, fa noho izany dia mila mampiasa fomba manokana rindrambaiko ianao.
Androany isika dia hanomboka sarimihetsika amin'ny 3D amin'ny alàlan'ny programa KMPlayer. Ity programa ity dia mpilalao media mahasoa sy mahomby indrindra, iray amin'ireo sehatra ireo ny fahafahana mihazakazaka sarimihetsika amin'ny fomba 3D.
Inona no ilaina mba hanaovana filma 3D amin'ny ordinatera?
Nalefa tamin'ny programa KMPlayer;
Sarimihetsika 3D miaraka amin'ny stereo stereo horizontal na vertical;
Ny solomaso Anaglyph amin'ny fijerena sarimihetsika 3D (amin'ny loko mena mena).
Ahoana ny fandehanana sarimihetsika amin'ny 3D?
Mariho fa ny fomba fiasa etsy ambany dia miasa miaraka amin'ny sarimihetsika 3D, izay ampitaina amin'ny Internet ny habaka ampy. Ny sarimihetsika 2D tsotra dia tsy miasa amin'io tranga io.
1. Raiso ny programa KMPlayer.
2. Ampio sary 3D misy horonantsary na horita stereo ho an'ny programa.
3. Ny famerenana an-dahatsary dia manomboka eo amin'ny efijery, izay misy sary roa avoakany na horita. Tsindrio eo amin'ny kisary 3D eo amin'ny zorony ankavia amin'ny efijery mba hivezivezy io fomba io.
4. Ity bokotra ity dia manana karazan-tsindrim-panafana telo: stereo stereo horizontal, stereo stereo stereo ary 3D mode. Miankina amin'ny karazana 3D sarimihetsika nomaninao, mifidy ny fomba 3D tianao.
4. Ho an'ny famolavolana maimaim-poana kokoa ny fomba 3D, tsindrio eo amin'ny faritra misy ilay horonan-tsarimihetsika amin'ny alàlan'ny tsindrio havanana ary asio ny totozy amin'ilay zavatra "Fanaraha-maso 3D". Hisy menion fanampiny izay aseho amin'ny sehatr'asa 3: fampidinana sy ny 3D, ny fanovana ny rafitra misy meta, ary ny fisafidianana loko (mila tarihin'ny lokon'ny solonao).
5. Rehefa vita ny fananganana 3D amin'ny ordinatera, dia manitatra ny sary amin'ny efijery feno ary manomboka mijery ny sarimihetsika 3D miaraka amin'ny solomaso anaglyph.
Androany dia naverinay ny fomba tsotra sy tsara indrindra hijerena sarimihetsika 3D. Amin'ny ankapobeny, amin'ny programa KMPlayer, azonao atao ny mamadika ny horonan-tsarimihetsika 2D ho 3D, fa tokony hametraka filtre 3D anaglyph manokana ao amin'ny mpilalao ianao, ohatra, Anaglyph.ax.